History of Computer University | PRO-X Software Solution
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဟာ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ သမိုင်းကောလိပ်နယ်မြေမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ) တို့နဲ့ ဆက်စပ် တည်ရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာ ပင်မအဆောင်ကြီး (၃) ဆောင်ရှိပြီး တစ်ဆောင်လျှင် အထပ်သုံးထပ်စီနဲ့ ဆောက်လုပ် ထားရှိပါတယ်။ အဆောင်တိုင်းရဲ့ မြေညီထပ်မှာ ကွန်ပျူတာစက်ခန်းများ၊ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာခန်းများ ထားရှိပြီး ပထမထပ် နဲ့ ဒုတိယအထပ်များမှာ စာသင်ခန်းများ ၊ ရုံးခန်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာန (Universities’ Computer Center) (UCC) ရယ်လို့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းက အစပြုခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာန ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ- (၁) တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ သုတေသနပညာရှင် အသီးသီးအနေနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ် အသုံးပြုတက်စေရန် နဲ့ (၂) အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှာ ကွန်ပျူတာ အသုံးချလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာန အနေနဲ့ အထောက်အကူပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာန မပေါ်ပေါက်မီကတည်းကပင် ကွန်ပျူတာအကြောင်း သိကောင်းစရာ သင်တန်းတွေကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သင်္ချာဌာနမှ တာဝန်ယူပြီး ပို့ချခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှာလည်း ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေကို ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလဟာ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် အစပိုင်းလောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာန ပေါ်ပေါက်ရေးစီမံကိန်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတို့ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ယူနက်စကိုအား သတ်မှတ်ပေးကာ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတို့ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာနကို စတင် တည်ထောင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ တက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာဌာနကို တရားဝင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ စတင် တည်ထောင်သူတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဒေါက်တာချစ်ဆွေ (ပါမောက္ခ ၊ သချင်္ာဌာန) နှင့် ကုလသမဂ္ဂဘက်မှ ဒေါက်တာ S.I Saleeb (အီဂျစ်) တို့ ဖြစ်ကြပြီး ပထမဆုံး UCC ညွှန်ကြားရေးမှုးမှာ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာချစ်ဆွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်များကွန်ပျူတာဌာနရယ်လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းရာမှာ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အထူးအရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းကြီး သုံးခုကို မူတည်ပြီး - (၁) စနစ်ဌာန (၂) လုပ်ဆောင်ရေးဌာန နှင့် (၃) အသုံးချဌာန ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းကာ ညွှန်ကြားရေးမှုးနဲ့ စီမံကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့တို့ရဲ့ဦးစီးမှုဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်၌ တက္ကသိုလ်များကွန်ပျူတာဌာနအတွက် Mainframe အမျိုးအစား ICL-1902-S ကွန်ပျူတာစက်ကြီး တစ်လုံး တပ်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေကို စာတွေ့လက်တွေ့ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ သန်းကောင်စာရင်း ပြုစုကောင်ယူရေးမှာ တက္ကသိုလ်များကွန်ပျူတာဌာနက (၂၄) နာရီပတ်လုံး စက်အားလူအားအပြည့်အဝနဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၂၂) ဦးကိုလည်း သင်တန်း ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်က စတင်ကာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သင်္ချာဌာနမှာ တွဲဖက်ပြီး မဟာသိပ္ပံ (တွက်ချက်ရေး) (M.Sc. Computer Science) နှင့် တွက်ချက်ရေး ဒီပလိုမာ (D.A.C) သစ်တန်းတွေကို စတင်ဖွင့်လှစ် ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဌာနဆိုင်ရာများအတွက် အချိန်တိုသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာစနစ်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုမှာ အတွေ့အကြုံများရင့်သန်လာတဲ့အခါ စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ၁၉၇၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှ စတင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်များကွန်ပျူတာဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ဒေါက်တာတင်မောင် (နောင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပထမဆုံး ပါမောက္ခချုပ်) ကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ UCC ကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ “အကောင်းဆုံးစီမံကိန်း” အဖြစ်သတ်မှတ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ ၌ ကုလသမဂ္ဂမှပင် CROMEMCO ကွန်ပျူတာစနစ် (မိုက်ကရို ကွန်ပျူတာ) ထပ်မံ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ယခင် ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကတည်းက အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ Mainframe ကွန်ပျူတာဟာ ဆက်လက်အသုံးပြုဖို့ အခက်အခဲ ရှိလာတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ PDP-11/70 မီနီကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ထပ်မံတပ်ဆင် အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်က စတင်ပြီး နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် သွားမယ့်သူတွေအတွက် အခြေခံကွန်ပျူတာ တစ်လသင်တန်းရယ် ၊ အစိုးရရုံးတွေက ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနေသူတွေအတွက် လေးလသင်တန်း၊ ခြောက်လသင်တန်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းတွေကို သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်မှာ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာတွေ၊ Master ဘွဲ့တွေ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် အခြေခံ Bachelor ဘွဲ့ဆိုတာ မရှိသေးလို့ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက စတင်ကာ သိပ္ပံဘွဲ့ (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) B.Sc (Computer Science) နဲ့ သိပ္ပံဘွဲ့ (ကွန်ပျူတာနည်းပညာ) B.Sc (Computer Technology) သင်တန်းတွေကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနရယ်လို့ အသစ်ဖွင့်လှစ်ပြီး စတင်သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနရဲ့ ဌာနမှူးမှာ ဒေါက်တာတင်မောင် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန နဲ့ တက္ကသိုလ်များကွန်ပျူတာဌာနတို့ကို ပူးပေါင်းပြီး သီးသန့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပထမဆုံး ပါမောက္ခချုပ်မှာ ဒေါက်တာတင်မောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် အဆင့်ရောက်တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ပေးအပ်တဲ့ဘွဲ့ ၊ ဒီဂရီများကို ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (B.C.Sc) နဲ့ ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ (B.C.Tech) ရယ်လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီး တပြေးညီမှာပဲ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ဒီပလိုမာ (D.C.Sc)၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံ(M.C.Sc)၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာ (M.C.Tech) နဲ့ မဟာသုတသိပ္ပံ (M.I.Sc) တို့အဖြစ်အမည်များ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိ ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတွေကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာပဲ သင်ယူဆည်းပူးနိုင်စေဖို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ National Computing Centre (NCC) နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး IDSC (NCC) ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်း ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကြီးမှာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ ဘွဲ့တွေကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းပေးခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခချုပ်ကတော့ ဒေါက်တာကျော်သိန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဖွဲ့စည်းထားပုံ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကို အောက်ပါဌာနကြီးသုံးခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကာ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ဒေါက်တာကျော်သိန်းက ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ ယခုစာရေးချိန်အထိ တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။
(က) သင်ကြားရေးဌာနာများ (၁) ကွန်ပျူတာစက်နည်းပညာဌာန (၂) ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နည်းပညာဌာန (၃) သုတသိပ္ပံဌာန (၄) တွက်ချက်ရေးသချင်္ာဌာန
(ခ) ကွန်ပျူတာစက်နှင့် သုတေသနာဌာနများ (၁) ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းဌာနခွဲ (၂) ကွန်ပျူတာစက်လည်ရေးဌာနခွဲ (၃) ကွန်ပျူတာစနစ်ပရိုဂရမ်ဌာနခွဲ (၄) သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ (၅) အသုံးချဌာနခွဲ (၁) (၆) အသုံးချဌာနခွဲ (၂)
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ (၁) စီမံရေးဌာနခွဲ (၂) ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ (၃) ကျောင်းသားရေးရာနှင့် ကျောင်းဆောင်ဌာနခွဲ (၄) စားမေးပွဲနှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဌာနခွဲ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော သင်တန်းများ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မျာ သင်ကြားပေးလျက်ရှိတဲ့ သင်တန်းတွေကို ဖော်ပြရရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
(က) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်းများ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က အပ်နှင်းချီးမြှင့်တဲ့ ကွန်ပျူတာဘွဲ့နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ (၁) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (B.C.Sc) (၂) ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ (B.C.Tech) တို့ဖြစ်ပြီး ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ကို အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနက် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဝင်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားသူတွေကို တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စီစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က စီစစ်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်။ အခြေခံပညာ အထက်တန်းစာမေးပွဲရမှတ် အနည်းအများအလိုက် ခွင့်ပြုတဲ့ဦးရေအထိ လက်ခံရွေးချယ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆/၉၇ ပညာသင်နှစ်မှာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဦးရေမှာ ၁၂၈ ဦးဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံး ဝင်ခွင့်အမှတ်မှာ (၃၇၅) မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာဘွဲ့သင်တန်းကာလမှာ ငါးနှစ်ဖြစ်ပြီး ပထမနှစ်မှာ သိပ္ပံရယ်၊နည်းပညာရယ် ဘာသာရပ်မခွဲဘဲ သင်ကြားရပါတယ်။ အဲဒီ ပထမနှစ် စာမေးပွဲ ရမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ဘာသာရပ် အထူးပြုကို ဒုတိယနှစ်မှာ ခွဲခြားပေးပါတယ်။ အခုအထိ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ရပြီးသူ (၁၀၂) ဦး၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ဘွဲ့ရပြီးသူ (၃၈) ဥိးရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) မဟာကွန်ပျူတာဘွဲ့သင်တန်းများ မဟာကွန်ပျူတာ(သိပ္ပံ) ဘွဲ့ကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကပင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာမှာ အခုဆိုလျှင် ၂၄ နှစ်ပင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အရင်က ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဘွဲ့ရယ်လို့ မရှိခဲ့တဲ့အတွက် စက်မှု၊ စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံဘာသာတွဲတွေနဲ့ ဘွဲ့ရထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ မဟာသိပ္ပံအတန်း တက်ခွင့်ရသူတွေ တက်ရောက်ဖို့ ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ မဟာဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး M.Sc (Computer Science) သင်တန်းကို သင်တန်းသား ၁၂ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသော ဘွဲ့ရများထဲမှာ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ယခုတိုင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် အမှုထမ်းနေဆဲ ရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မဟာကွန်ပျူတာ အတန်းများကို သုံးမျိုးခွဲခြားကာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ နောက်ဆုံံးနှစ် စာမေးပွဲများမှ မဟာဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အဆင့်မီသူများကို မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (M.C.Sc) နှင့် မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာ (M.C.Tech) ဘွဲ့သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ယခင်ကရှိခဲ့တဲ့ M.Sc (Computer Science) သင်တန်းကို (M.I.Sc) မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြီး သတ်မှတ်ထားသော ပညာသင်နှစ်မှာ B.E., B.Com. B.Eco. (Status), B.Sc., (Maths,Physics,Chem,I.C,Geol) ဘွဲ့ရသူတွေအနက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နဲ့ မဟာသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ဖို့ အဆင့်မှီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မဟာဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရဖို့အတွက် ဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ (Aptitude Test) ဖြေဆိုရပြီး အောင်မြင်သူတွေကို လူတွေ့စစ်ဆေးကာ ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ရပါတယ်။ မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ၃၀ ဦးအထိ လက်ခံ သင်ကြားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ မဟာဘွဲ့နောက်ဆုံးနှစ် သင်တန်းကာလမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး Thesis ကို နောက်နှစ်နှစ်အတွင်း ရေးသားတင်သွင်းရပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ မဟာကွန်ပျူတာဘွဲ့ (M.Sc) ရရှိထားသူ ၁၃၃ ဦး ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့ ဒီပလိုမာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ D.A.C ဟာ လုပ်ငန်းခွင်လောကမှာ အလွန်အသုံးတည့်ပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ ဒီပလိုမာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ D.A.C (Diploma in Automatic Computing) တွက်ချက်ရေးဒီပလိုမာကို အခုအခါ D.C.Sc (Diploma in Computer Science) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ဒီပလိုမာလို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ D.C.Sc ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာကို တက်ရောက်နိုင်ခွင့်အတွက် လက်ရှိ၌ လုပ်သက်နှစ်နှစ်ရှိ အမြဲတမ်း အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ရန် လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် BE., B.Com., B.Ecom.,B.A. (Eco),B.Sc (Maths, Phys.,Chem., I.C., Geol) ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူများသာ လျှောက်ထားနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ D.C.Sc ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ လျှောက်ထားသူတိုင်းဟာ မိမိလက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သို့မဟုတ်) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လျှောက်ထားရပါတယ်။ ဝင်ခွင့်အတွက် မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းဝင်ခွင့်လို ရေးဖြေစာမေးပွဲနဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးရွေးချယ်ပြီး တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ D.C.Sc ဒီပလိုမာသင်တန်းဟာ အချိန်ပိုင်း နှစ်နှစ်သင်တန်းဖြစ်ပြီး စာတွေ့သင်ကြားတာကို ရုံးတက်ချိန်မတိုင်မီ နံနက် ရးဝ၀ နာရီမှ ၉းဝ၀ နာရီအထိ သင်ကြားပြီး လက်တွေ့ကိုတော့ ညနေပိုင်းရုံးဆင်းချိန်နဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေ နေ့များမှာ လုပ်ကြရပါတယ်။ D.C.Sc သင်တန်းကို တစ်နှစ်လျှင် သင်တန်းသား ၉၀ ဦးခန့် လက်ခံသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အခုအထိ D.A.C, D.C.Sc ဒီပလိုမာ ရရှိသူပေါင်း ၄၇၉ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဃ) I.D.C.S သင်တန်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်ရှိ သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံ National Computing Centre က ပေးတဲ့ ဒီပလိုမာ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့စဉ်က မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ၁၀၀ ဦး၊ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ၁၀၀ ဦး၊ စုစုပေါင်းကျောင်းသား ၂၀၀ ကို ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနဲ့ ရွေးချယ်သင်ကြားခွင့်ပြုခဲ့ရာ အောင်ချက် ၈၀.၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့တာဟာ အာရှမှာ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ IDCS သင်တန်းတွေကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်းသား ၁၀၀ လက်ခံသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းကို အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူတိုင်း တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး သင်တန်းကာလမှာ တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအထ IDCS ဒီပလိုမာ ရသူပေါင်း (၃၄၀) ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(င) အခြားသင်တန်းများ မြန်မာနိုင်ငံရုံးတွေမှာ ကွန်ပျူတာကို စန်စတကျ ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် C.P.C (Computer Programming Course) များ၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်တွေအတွက် အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းများ၊ အခြားလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ (In Service Course) ကိုလည်း ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းတွေဟာ ဌာနဆိုင်ရာများအတွက် သီးခြားဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ သင်တန်းများဖြစ်လို့ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်နိုင်ခွင့်မရှိဘဲ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိဌာန လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နဲ့ ညှိနှိုင်းကာ တက်ရောက်နိုင်တဲ့ သင်တန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုဟာ ကွန်ပျူတာပညာ ပြန့်ပွားရေးသာမကပဲ ကွန်ပျူတာနည်းပညာရပ်ကိုလည်း အဆင့်မီ တိုးတက်အောင် လေ့လာကြိုးပမ်းရင်း၊ ဖြန့်ဖြူးပေးရင် တိုင်းပြည်အကျိုးပြု လုပ်ငန်းရပ်များကို ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးလဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ရာမှာ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ရှေ့သို့လှမ်းမျှော် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာကျော်သိန်း ပါမောက္ခချုပ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
Visits : 5768